Maalinta: Meey 1, 2020
Iyada oo qayb ka ah tallaabooyinka la qaaday CoD-19 faafa, bandoowga waxaa lagu dabaqi doonaa 30 magaalo magaalo iyo Zonguldak maanta iyo sabtida iyo axadda. Si loo hubiyo in xirfadleyda daryeelka caafimaadka ee IMM aysan wax dhibaato ah ku qabin u-socodka iyo ka imaashada shaqada [More ...]
Shan Bilyan oo Dad Ah Waxay Qaadan Karaan Labo Sano Oo Aan Ku Dhamaaneynin Corona la'aan
Shan Bilyan oo Dad Ah Waxay Qaadan Karaan Labo Sano Oo Aan Ku Dhamaaneynin Corona la'aan; Khubaradu waxay sheegeen in faafitaanka masiibada ee loo yaqaan 'covid-19' ay u badan tahay inuu socdo ilaa labo sano, iyo saddex-meelood laba meelood tirada dadka kunool adduunka ma dhamaan doonto iyadoon la helin difaac. [More ...]
Qaylodhaanta Coronavirus ee Ciidanka Ruushka
Sida lagu sheegay bayaanka ay soo saareen Ciidamada Qalabka Sida ee Ruushka, tirada askarta ee ku fiicnaa baaritaanka COVID-19 waxay gaareen 901 ilaa maanta. Bayaanka, 19 ka mid ah 324 askar oo ku dhacay baaritaanka COVID-176 waxaa la dhigay isbitaal hoos taga Wasaaradda Difaaca Ruushka. [More ...]
Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo laabano maalmahan aan seegahay; inay yihiin geesiyaal dhabta ah ee shaqaalaha tareenka habeen iyo maalinba qaadashada for Turkey! Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno shaqaalaheena tareenka ee xoojiyay xooggeena 164 sano, iyo dhammaan shaqaalaheena [More ...]
Golaha Wasiirrada Gaadiidka ee Turkiga Shirka Shirka Fiidiyowga, Wadada Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars ayaa hoosta ka xariiqday in Wadada Iskuxiran Gawaarida Kala Duwan ay Tahay mid Firfircoon, kana Bilaabeysa Tashkent ilaa iyo inta ugu horeysa, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha. [More ...]
Soo celinta qandaraaska dhismaha xarun taariikhi ah, halkaas oo Guddoomiyaha Gobolka Kırklareli Cusmaan Bilgin uu ku siiyay war wanaagsan oo ah in loo furi doono dhaqan iyo kafateer bilihii la soo dhaafay. Taliye Bilgin wuxuu sanooyin ka maqnaa saldhigga taariikheed ee ku yaal badhtamaha magaalada. [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha ayaa qaadi doonta dhismaha wadada tareenka ee Ba ​​metakşehir-Kayaşehir oo ku taal jidka Isbitaalka Magaalada Başakşehir ee Magaalada Istanbul, oo ah kan ugu horreeya Yurub ee leh muuqaalka ugu sarreeya ee bukaan jiifka. Wadada Magaalada [More ...]
Gudaha Norway Heer Isugeyn ah, Tareenka wuxuu ku dhacayaa Gaari Xamuul qaada
Gaari xamuul ah oo watay gaari nooca xamuulka qaada ah oo kuyaala magaalada Skien ee dalka Norwey ayaa ku xayirnaa meel isgoyska ka socda sabab aan la garanaynin. Caqabadaha nabadgelyada ee isgoyska heerka ayaa lagu xiray TIR, oo ka bixi kari waayey jaanta, ka dibna dhammaan [More ...]
Maaskaro Waxaa Loo Qaybiyay Ganacsato Bixiya Adeegga Gaadiidka Dadweynaha ee Van
Degmooyinka Van Metropolitan ayaa baabiyay gaadiidkooda iyagoo u qaybiyey maaskaro taangiyada basaska iyo ganacsatada basaska ee gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalada iyada oo la eegayo tallaabooyinka coronavirus. Cudurka coronavirus, ee saameeya adduunka oo dhan [More ...]
Maaskaro leh gaas ayaa loo qaybiyay ganacsatada Ordu
Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, oo hawlaheeda si habsami leh u fulisa dhammaan gobollada oo dhan daacuunka dartiis, ayaa taxaddarkeeda ku ilaaliya heerarka ugu sarreeya dhammaan aaggaga. Xaaladda guud, Degmada Caasimadda waxay sidoo kale adeegsataa gaadiidka dadweynaha ee dadweynaha ay si aad ah u isticmaalaan. [More ...]
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu wuxuu baaritaan ka sameeyay Hacıosman Grove, kaas oo magaciisa loo badalay “Atatürk Forest Forest” kadib qaban qaabada. Isagoo sheegay in baarkinku yahay goob aad u wanaagsan, ayuu yidhi İmamoğlu, “Waxay ku dhowdahay gaadiidka metrooga. [More ...]
Wadada Waqooyiga Marmara Ayaa Dhameystiri doonta Dhamaadka 2020
Karaismailoğlu, oo baaray goobta dhismaha ee degmada Akyazı qeybta 6aad ee Wadada Waqooyiga Marmara, ayaa wariyeyaasha u sheegay in dhererka guud ee wadada 6-qaybood ay tahay 400 kilomitir. Wasiir Karaismailoğlu, 73 [More ...]
Matxafka tareenka ee İzmir
Dhisme geedka canabka ah oo ku yaal agagaarka Alsancak Station, oo ka mid ah hiddaha dhaqanka ee İzmir, ayaa ku yaal matxaf maanta. Matxafka 'Izmir TCDD iyo Art Gallery, halkaas oo ay kugula kulmi doonaan markhaatiyaal dhab ah oo taariikhda ah, waa xusuusta wadooyinka tareenka ee Anatolia [More ...]
Matxafka İzmir Çamlık Matxafka Tareenka Steam
Matxafka 'Moaml Stek Steam Locomotive Museum ama Çamlık Railway Museum' waa matxaf furan oo tareenka laga furay oo ku yaal xaafada Çamlık ee degmada Selçuk ee Izmir. ugu weyn waa museum tareenka iyo madxafka oo ah ururinta ugu ballaaran ee Europe ee Turkey [More ...]
Jidadka iyo Xirmooyinka ayaa isku diyaarinaya Xagaaga Eskisehir
Sii wadida dhismaha wadada, dayactirka iyo howlaha dayactirka ee ka socda bartamaha magaalada iyo baadiyaha iyadoo ay kulushahay cimilada, Dowlada hoose ee Magaalada Eskişehir, iyadoo dayactirka wadooyinka burbursan jiilaalka ee miyiga, ha uga bixin bartamaha magaalada. [More ...]
Xirmooyinka Caafimaadka ayaa loo Qaybiyay Laydhka Wadooyinka ee Mersin
Dowladda Hoose ee Magaaladda Mersin waxay sii wadaysaa inay u qeybiso xirmada caafimaadka muwaaddiniinta muddadii uu dillaacay coronavirus. Xirmooyinka caafimaad ee loo diyaariyey baaxadda magaalada weyn laguma dabaqi karo rakaabka saaran gawaarida inta lagu jiro usbuuca markii bandowga aan la adeegsan. [More ...]
Bayaanka lagu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ee Agaasinka Guud ee Wershadaha Militariga ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya (GAMI), waxaa lagu sheegay in daraasadaha loogu talagalay horumarinta iyo soo saarista nidaamyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn la bilaabay. Bayaanka la soo saaray, jadwalka mashruuca [More ...]
Calaamadaha Digniinta Fog ee Bulshada ee Akçaray Tramways iyo Basaska
TransportationPark, oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, waxay hirgalisay calaamadaha digniinta fogaanta bulshada ee dhammaan basaska iyo taraamyada. Codsigan, waxaa loogu talagalay rakaabka inay fuliyaan gaadiid caafimaad qaba oo leh awood hooseysa basaska iyo taraamyada. ALL [More ...]
Eurasia Airshow 2020 Fair ayaa dib loo dhigay illaa Diseembar
bandhig duulista horeysay Turkey ee ku salaysan show duulimaadka Eurasia Airshow 2020 ee lagu qaban doono garoonka caalamiga ah Antalya on 2-6 taariikhda December 2020. Carwadan, oo la qorsheeyay in la qabto bisha Abriil, ayaa ahayd in dib loo dhigo sababo la xiriira hannaanka faafa. cadaalad [More ...]
Bayaanka ay soo saartay Wasaaradda Difaaca Qaranka, waxaa lagu xasuusiyay in diyaaradda, oo ay diyaarisay tilmaamaha Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, oo qaatay kooxdii ugu horreysay ee agab caafimaad oo loo adeegsado dagaalka lagula jiro cudurka 'Covid-19', oo laga qaaday Ankara 2-kii subaxnimo 10.00 maalmood ka hor. [More ...]
Wasiirada ninkeeda, WHO Explained Turkey ee loola dagaallamo Covidien-19 ah
Agaasimaha Guud ee Caafimaadka Adduunka (WHO). Kulankii macluumaadka, waxaa gudoominayay Tedros Ghebreyesus, Wasiirka Caafimaadka Dr. Fahrettin Koca, ayaa sheegay in la Covidien-19 ee dagaalka Turkiga. Waxaa la qabtay shirarka fiidiyowga iyo adduunka oo dhan [More ...]
Isugeynta wax ku oolka ah ee Coronavirus-ka ee Goobaha Shaqada
Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada waxay sii wadaysaa dadaalkeeda si loo hubiyo nolol caafimaad iyo badbaado leh ee shaqada COVID-19. Wasaaradda halista loo arki karaa ka daqiiqad ugu horeysay ee ka dillaacay dalka Turkiga, ka hormarey warshadaha in ay noqon more [More ...]
3 maalin ka hor xayiraad ku soo galeen wadada, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Waaxda Amniga Guud, Kalkaalinta Taliska Guud iyo Guard Command Coast kooxaha dalka oo dhan la qaybgalka 15: 00-24: 00 saacadaha u dhaxeeya isku mar Turkey Peace Trust [More ...]
Badhasaabka Karabük Fuat Gürel wuxuu baaray kaabayaasha iyo shaqooyinka balaarinta wadooyinka oo ay bilaabeen kooxaha Maamulka Gaarka ah ee gobolada ee kuyaala xarunta Keltepe Ski Center waxeeyna ka heleen macluumaad maamulada. In looga isticmaalo kaabayaasha iyo shaqooyinka fidinta wadada [More ...]